Miady Hevitra momba An’i Darfur: Mametraka Fanontaniana Amin’ny Ambasadera Sodaney ao Amin’ny Firenena Mikambana Ny Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2018 20:01 GMT
“Inona no tadiavin'i Sodàna?” “Iza no heverinao fa manome fitaovam-piadiana ho an'ny mpikomy?” Ireo fanontaniana tsotra mamitaka ireo no napetraky ny dinidinika tamin'ny lanonana Reuters Newsmaker tamin'ny ambasadera Sodaney ho an'ny Firenena Mikambana tao New York ny 24 May, 2007. Tsy dia mazava ny valinteniny, ary feno fotoana mahasosotra ny fotoana. Nanome tsiny ny ady feno herisetra ao Darfur noho ny fiovaovan'ny toetr'andro mihitsy aza ilay ambasadera. Tsy nanaiky ireo mpidinika hafa.
Ndesanjo Macha, tonian-dahatsoratry ny Global Voices Afrika Atsimon'i Sahara, nibilaogy mivantana ny hetsika ary nasaina hametraka fanontaniana mivantana avy amin'ireo bilaogera Sodaney tamin'ny fotoana Fanontaniana sy Valiny.
Tamin'ny hetsika farany tao amin'ny Reuters Newsmaker, nisy ny fandefasana mivantana amin'ny alalan'ny tranonkala izay nahafahan'ireo bilaogera nihaino sy nanontany nandritra ny zava-niseho. Tamin'ity indray mitoraka ity, nampidirina tao amin'ny tranonkalan'ny Reuters taorian'izay (ato) sy horonantsary (ato) ny fandraisam-peo feno tamin'ny fotoana. Tsindrio fotsiny raha hijery fa mbola ho ela vao ho voavaha ny fifandonana.
Nisy tamin'ireo mpandray fitenenana nisolo tena ny Departemantam-panjakana Amerikana (Lauren Landis), ny Firenena Mikambana (Mia Farrow), ny International Crisis Group (John Prendergast) ary ny NBC News (Ann Curry).
Nibilaogy ny hetsika tao amin'ny bilaogin'ny openDemocracy aho. Ary ity ny kaonty Reuters.